Amanani 28 (Xhosa)České uživatelské rozhraní
2 Bawisele umthethoumthetho oonyanaoonyana bakaSirayeli, uthi kubo, Umsondezo wam, isonkaisonka sam sokudla kwasemlilweni, ivumbaivumba elithozamisayo kum, nokugcina ukuwusondeza kum ngexesha lawo elimisiweyo.
3 Uze uthi kubo, Kuko oku ukudla kwasemlilweni enokusondeza kuYehova: iimvanaiimvana ezimbini ezimnyaka mnye ezigqibeleleyo, zemini ngemini, zedini elinyukayo lamaxesha onke;
4 enye imvanaimvana woyenza kusasakusasa, eyesibini uyenze lakutshona ilanga;
8 Eyesibini imvanaimvana woyenza lakutshona ilanga. Woyenza ngokomnikelo wokudla wakusasa, nangokomnikelo walo othululwayo, ukudla kwasemlilweni ivumbaivumba elithozamisayo ke elo kuYehova.
9 Ke ngomhla wesabathangomhla wesabatha, nosondeza iimvanaiimvana ezimbini ezimnyaka mnye, ezigqibeleleyo, nezahlulo zeshumi zibe zibini zomgubo ocoliweyo, ube ngumnikelo wokudla, ugalelwe ioli, nomnikelo walo othululwayo.
11 Ekuthwaseni kweenyanga zenu nosondeza kuYehova idini elinyukayo, iinkunzi ezintsha zibe mbinimbini, amathole eenkomo, nenkunzi yemvu ibe nyenye, neemvana ezigqibeleleyo ezimnyaka mnye zibe sixhenxe;
13 nesahlulo seshumi somgubo ocoliweyo ngasinye, ube ngumnikelo wokudla, ugalelwe ioli, kuyo imvanaimvana enye. Lidini elinyukayo, livumba elithozamisayo, kukudla kwasemlilweni ke oko kuYehova;
15 Nenkunzi yebhokhwe exhonti yoba nyenye, ibe lidini lesono kuYehova; nolenza ndawonye nedini elinyukayo lamaxesha onke nomnikelo walo othululwayo.
17 Ngomhla weshumi elinesihlanu waloo nyanga ngumthendeleko. IintsukuIintsuku ezisixhenxe kodliwa izonka ezingenagwele.
19 Nosondeza ukudla kwasemlilweni, idini elinyukayo kuYehova: iinkunzi ezintsha zibe mbinimbini, amathole eenkomo; nenkunzi yemvu ibe nyenye; neemvana ezimnyaka mnye, zibe sixhenxe; zobazoba zezigqibeleleyo kuni.
21 Wosenza isahlulo seshumi ngasinye kuyo imvanaimvana enye, kuzo iimvanaiimvana ezisixhenxe.
22 Nenkunzi yebhokhwe yoba nyenye, ibe lidini lesono lokunicamagushela nina.
24 Niya kwenjenjalo imihla yonke, ngaloo mihla isixhenxeisixhenxe, isonkaisonka sokudla kwasemlilweni, ivumbaivumba elithozamisayo kuYehova, nenze ndawonye nedini elinyukayo lamaxesha onke, nomnikelo walo othululwayo.
27 Nosondeza idini elinyukayo libe livumba elithozamisayo kuYehova: iinkunzi ezintsha zibe mbinimbini, amathole eenkomo; nenkunzi yemvu ibe nyenye;
29 nezahlulo zeshumi zibe zibini kuyo inkunzi yemvu inye, nesahlulo seshumi ngasinye kuyo imvanaimvana enye, kuzo iimvanaiimvana ezisixhenxe.
30 Nenkunzi yebhokhwe exhonti yoba nyenye, yokunicamagushela.